Kuongorora uye unboxing yeiyo iPhone SE, iyo hombe diki iPhone | IPhone nhau
Wongorora uye unboxing yeiyo iPhone SE, iyo huru diki iPhone
Miguel Hernandez | | iPhone SE, IPhone Zviteshi
Sezvatakamboita neiyo iPhone 6s muzuva rayo, uye zvingave zvishoma sei yazvino ina-inch chishandiso kubva kuApple, Tinokuunzira ongororo yakakwana yevhidhiyo uye unboxing yeiyo iPhone SE, iyo huru diki foni kubva kuApple. Isu tinokuratidzira iwe ins uye kubuda kweiyo nyowani ina-inch chishandiso iyo vakomana kubva kuCupertino vatangisa kukunda iyo diki skrini. Tichaunza zvikamu zvakanakisa uye zvakaipisisa zveiyo iPhone SE kuitira kuti iwe ugone kuzvisarudzira wega kana kuti zvisina basa. Yakauya mumaoko edu mazuva mashoma apfuura, asi hatina kukwanisa kuramba kukuratidza Uri kuzoipotsa here? Pinda uye iwe uchaona izvo Apple's iPhone SE inovanza, iyo "hombe diki iPhone."
Apple haina kuvanza kuzivisa rudo kune iyo iPhone SE: «Kukura kwako uri mudiki ... » Inoverenga sirogani iyo inotungamira zvese nezve iyo ichangoburwa-ina-inch chishandiso chakapihwa nekambani yeCupertino, iyo iPhone SE ndiyo yekupedzisira sarudzo kune avo vasingade kutakura chidhinha muhomwe, uye Apple haina kuda kuvaodza moyo , imwe yeakanyanya kukunda mibairo yeiyo saga ye iPhone yakabatana netekinoroji yekucheka-nzvimbo munzvimbo yakadzivirirwa, iyi ndiyo iPhone SE uye izvi ndizvo zvazvinotipa.
1 Dhizaini ichave inozivikanwa kwatiri
2 Wakakura sei iwe uri mudiki ...
3 Iyo kamera ndiyo nyeredzi yeiyo iPhone SE
4 Kuita uye bhatiri
5 Kufananidza neiyo iPhone 6 uye iPhone 6s
6 Zviri mukati meiyo iPhone SE bhokisi uye kuongorora kwevhidhiyo
7 Iyo yenhaka software yeiyo iPhone 6s
8 Mutengo uye kuwanikwa kweiyo iPhone SE
9 Kugumisa kwekupedzisira
Dhizaini ichave inozivikanwa kwatiri
Kuti tiongorore, isu takapa iyo Rose Goridhe vhezheni ine chinzvimbo che 16 GB yekuchengetedza, dhizaini isina kufanana, asi yakafanana nezvatinowana muiyo iPhone 5s. Isu tinozviwana tiine kureba kwe12,38 cm, ichiperekedzwa nehupamhi hwe5,86 cm uye ukobvu hwe0,76mm, iyo kunyangwe isiri Apple's thinnest, chishandiso chakatetepa zvakakwana kune izvo zvatinowana nhasi pamusika. Kumashure kunoenderera "tsika" yakatanga pa iPhone 6s, sanganisira mavara ekutanga emuenzaniso (SE) pasi pechiratidzo «iPhone». Pane ino chiitiko, tinoona kuti Apple logo yakachinjiswa muvara rimwechete sealuminium yechigadzirwa uye nzvimbo dzepasi uye dzepamusoro chena dzinowana matte toni, ichiperekedzwa nehuremu hwegumi nemazana matatu negumi. Zvimwe zvakasara zvakanyatso kufanana neiyo iPhone 113s.
Pano isu takakwanisa kukoshesa kuti Apple yanga isingade kutambanudza dhizaini, zvirinani, kunyangwe iri nyaya yekuravira, tinogona kuseta dhizaini inogarwa nhaka kubva ku iPhone 5s seimwe yeakanaka kwazvo akatsanangurwa kusvika nhasi nebazi. inotungamirwa naJonny ndave ndiri mugadziri weApple kwemakore. Inowanikwa mune inozivikanwa Apple-ina-mavara renji iyo yega foni kambani yaida kuteedzera, Rose Goridhe, Space Grey, Champagne Goridhe uye Sirivhi Chena. Mhete yesimbi iyo inoisa iyo ID yekubata iri pachena kuti inowirirana nechinhu chitsva, asi kumberi nemukati mematanho ekumashure nekumberi antenna anowanikwa mumumvuri miviri chete, nhema yeiyo Space Grey modhi uye chena kune ese akasara akateedzana. renji mavara.
Nenzira imwecheteyo, sezvatinoona mumufananidzo, chimiro chakachengetedzwa zvakangofanana neiyo iPhone 5s yekumhanyisa kumhanya uye mabhatani, ese akagadzirwa nealuminium imwechete seye mudziyo, akapendwa muvara neruvara rwe mudziyo. Humwe hunhu ndewekuti mune ino shanduro hatiwane yakajairika meiki kurira (senge maMaracas) ayo atinowana muiyo iPhone 5 ne5s kana tichizunza mudziyo, izvo zvinopupurira kuenderana uye dhizaini yekudzidza kwechigadzirwa, a Pfungwa yakanaka yekudzokorora dhizaini ndeyekuti hapana nzvimbo yekukanganisa, ndiyo iyo iPhone SE.
Wakakura sei iwe uri mudiki ...
Chii chinovanza mukati mechigadzirwa chinhu chinozivikanwa nevazhinji asi chakakosha kurangarira, kana chamboongororwa kusvika pakuneta tine dhata rakanyatsonaka rekugovana. Iyo iOS inoshanda sisitimu inosundirwa ne A9 processor ine 64 Bit architecture, inotsigirwa neM9 co-processor iyo inobvumidza kushandiswa kwemabasa akadai sa "Hei Siri" nguva dzose pakamira, ichiperekedzwa kuita izvi. 2 GB yekuyeuka LLDDR4 DRAM iyo inofadza vashandisi vanonyanya kuda.
Izvo hazvigone kupotsa zvakadaro, chip NFC izvo zvinobvumidza kuwana zvakanakisa kubva kuApple Pay, iyo yekudyidzana isingabhadharwe chikuva iyo Apple iri kuenderera mberi ichitenderera pasirese uye iyo yakabva kuruoko rweiyo iPhone 6. Zvichakadaro, iyo 4-inch skrini ine resolution ye 1.136 na640 pixels, pa326 pixels padiki, inonyanya kuzivikanwa seRetina kuratidza, ine kupenya kwakanyanya kwe500 cd / m2 uye oleophobic anti-chigunwe chevhavha.
Nezve Kubata ID kuri kunetsekana, tinowana chizvarwa chekutanga, chakafanana chinoshandiswa naApple muiyo iPhone 5s uye iyo iPhone 6, iyo kunyangwe hazvo isiri izvo zvatinoona muiyo iPhone 6s, hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeakanakisa mafoni minwe. vaverengi pamusika. Saizvozvo, kubatana kwave chimwe chikamu chakavandudzwa zvakanyanya, ine kubatana padanho rakaenzana zvakare seiyo iPhone 6s, ne Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac uye LTE Mberi yekubatanidza, hunyanzvi hwepamusorosoro hunowanikwa mukutaurirana zvisina waya Saka, ini handina kukwanisa kupotsa iyo Bluetooth 4.2.
Iyo kamera ndiyo nyeredzi yeiyo iPhone SE
Vazhinji vakatadza kubuda mukushamisika kwavo pavakaona macamera kamera eiyo iPhone SE, yakagara nhaka tekinoroji yeiyo iPhone 6s, ne 12MP iSight kamera ine mapikiseti e-ultra-slim, Inowirirana zvizere neRarama Mapikicha, mbiri Yechokwadi Tone kupenya, nzvimbo yakatarisa ye2,2, yakafukidzwa nesafiri kristaro uye nezvose zvakagadziridzwa padanho re software zvinogona kutarisirwa kubva kwazviri. Chii chimwe, inorekodha vhidhiyo mukugadziriswa kwe4K pa30 FPS, 1080p resolution pa30 kana 60 FPS uye 1080p inononoka kufamba pa120 FPS kuwedzera ku720p pa240 FPS. Uye zvakare, iwe unogona kutora mapikicha pa8 Mpx resolution panguva imwechete iyo yatinorekodha vhidhiyo mukugadzirisa 4K, iine 3x zoom yedhijitari.
Iyo yekumberi kamera ingangove iyo isina kusimba poindi, iine chete 1,2 Mpx ndiyo yega nhaka yeiyo iPhone 5, inorekodha vhidhiyo mu720 resolution kunyange hazvo mhando ichisiya yakawanda yekuda, zvisinei, ine iyo Retina Flash basa rinowanikwa chete mu ichangoburwa iPhone mamodheru, akafananidza kumberi kupenya iyo inokutendera iwe kuti utore mukana wakazara wako wega weti mune yakaderera mwenje mamiriro, bvunzo dzakatiratidza isu kuti inoshanda kwazvo, zvakanyanya kupfuura isu zvatingatarisira kubva kwazviri. Iko kutarisana kwekumberi kweFaceTime HD kamera iri 2,4 uye zvakare ine yakaputika modhi senge yekumashure.
Kuita uye bhatiri
Iyo iPhone SE haina kuvanda kubva kune chero chinhu uye chero munhu, Hardware yayo yaita kuti ive imwe yemasimba masimba pamusika, nekudaro, grafiki yayo yekumisidzana inoenderana neMETAL inoita kuti ive yechokwadi muchina kumhanyisa chero mhando ye multimedia kana vhidhiyo zvemukati. Vhidhiyo mitambo, chimwe chinhu chinorasikirwa nezvakawanda zvarinoreva pane mana-inch pani, asi kune vakawanda zvakaringana. Isu tinoona kuti iyo iPhone SE inofamba chaizvo yakajeka ne iOS 9.3.1, isina kusangana nechero mhando yejerk kana kudonhedza mumafuremu, chaizvo iyo 2GB ye RAM uye nenyaya yekuti simba rinodiwa pachiratidziro rakadzika ita kuti iPhone SE ifambe ichikurumidza, Kusvikira ikozvino zvave zvisingaite kunyatsoisa muyedzo, kuratidza mashandiro ari nani pane iyo iPhone 6 semuenzaniso, chokwadi chiri pachena kana tichifunga kuti inopeta memory ye RAM yechinhu ichi.
Kana riri bhatiri, isu tinowana iyo inogona kunge iri parizvino chishandiso chinonyatsogona kushandisa bhatiri Pamidziyo yese yeIOS parizvino iri pamusika, zvese zviyedzo zvangu zvekushandisa uye zvevamwe vaongorori zvinogutsa chose, nezvimwe zvinwiwa zvinopa zvakakwana kupedza zuva nebhatiri rakaringana, zvichiratidza zvakare yakawanda nguva yekushandisa uye kuvhenekerwa kwemwenje. screen kupfuura iyo iPhone 6 uye iPhone 6s, izvo zvinoita kuti chive chinhu chakachinjika chaicho, chimwe chinhu chataive tisina chokwadi nezve saizi yechigadzirwa. Hupenyu hwebhatiri hunogutsa chete. Iine 1.642 mAh, yakawanda yechikwereti inoenda kune vese A9 processor uye M9 koprocessor.
Kufananidza neiyo iPhone 6 uye iPhone 6s
Takatarisana nehurukuro yekusingaperi, saizi yechidzitiro. Nekudaro, kune zvimwe zvinoshandiswa zvinopfuura kudya zvemultimedia zvemukati, iwo mana masendimita anga akanyatsokwana uye mune zvimwe zviitiko kutendwa. Hatifanire kukanganwa kuti tinozviwana tiine imwe sentimendi pakureba uye imwezve masendimita paupamhi (millimeter kumusoro uye pasi) izvo kune mamwe mabasa zvinogona kusakwana, iyo iPhone 6 skrini iri 4,7 inches, uye kazhinji inotimanikidza kushandisa chishandiso nemaoko maviri. Iyo ingori nyaya yekuzviisa pasi, pachezvangu mune dzimwe nguva ndinopotsa iwo mana inches, asi ini ndinopedzisira ndasarudza iyo 4,7 ″.
Ukobvu, zvisinei, hahuna kuve dambudziko zvachose, mutsauko mumamilimita haushoma, uye iyo iPhone 4 chishandiso chakagadzirirwa ergonomics, saizi yayo yakakwana uye inokodzera mune chero ruoko. Nekudaro, kunyangwe dhizaini inogona kunge isinganyanyoyevedza, iPhone 6's yakakomberedzwa micheto kutora mukana wekunyaradza. Kunyaradzwa kwevakawanda kunogona kukonzera kunzwa kwete kwekushaya simba chete, asi kutya kwekusingaperi kuti kuchatsvedza mumaoko, uye ndekwekuti haugone kuwana zvese. Iyo iPhone SE iri nyore chaizvo kutakura, nyore kutakura uye nyore kushandisa, kunyange zvingave zvisingaite kufunga nezve iPhone 6s ine hukasha micheto yeiyo iPhone SE, mashandisiro ayo angave akaomesesa, nekudaro, ese ari maviri mamodheru pane kuteedzera dhoko riri muruoko, kunze kwekuti iyo iPhone SE inogona kushandiswa neimwe.
Zviri mukati meiyo iPhone SE bhokisi uye kuongorora kwevhidhiyo
Pano Apple haina kuda kusiya nzvimbo yekushamisika, senge mukugadzirwa kweiyo iPhone SE, uye ndeyekuti haingochengetedze iyo yakafanana dhizaini seiyo iPhone 5, asi zvakare Inochengetedza kurongedza kwakafanana uye izvo zvakafanana izvo zvatave kutsvaga kubvira 2012. Kutanga, mushure mekuvhura bhokisi, tinowana iyo iPhone, ino nguva yakaputirwa mumapurasitiki ekudzivirira akapatsanuka, kusiyana neiyo iPhone 6 iyo ine purasitiki imwe inovhara chishandiso chose. Mushure mekuibvisa, tinowana kamuri yemagwaro, angangoita asina basa, kadhibhodhi yechimisikidzo, zvimiti zveApple uye kiyi yekamuri yeNanoSIM, panguva ino yakati rebei kupfuura mumamodeli apfuura, chaizvo muchimiro chetambo.
Iyo EarPods yakanyatsovharwa, plug yekuchaja zvinoenderana nenyika uye modhi yekubatanidza uye Mheni tambo inoperekedza mukati mebhokisi, hapana chimwezve. Izvo zvakafanana zvishongedzo sevamwe vese maApple madivayiri. Pano Apple haina kuda kuzviwedzeredza, zvisinei hazvo zvishoma zvinokumbirwa kwazviri, izvo zvakafanana zvishongedzo uye zvakanyatsodiwa. Dzakaenda nguva idzo senge dzeiyo Yekutanga iPhone uye 3G iyo yaisanganisira chamois kuti tikwanise kuchenesa chishandiso, nhema suede sirika-yakavhenekwa neApple iyo kana isu tikawana semuenzaniso mune MacBook Pro renji sechipo, chimwe chinhu chiri zvechokwadi akaonga.
Iyo yenhaka software yeiyo iPhone 6s
Isu takatonyora chinyorwa kukuudza kuti iyo iPhone SE pamwe inotaridzika kunge iPhone 6s pane iyo iPhone 5s kunyangwe iri yekunze dhizaini, uye kuti yakagara nhaka angangoita ese maficha padanho re software. Isu tinotanga kusangana ne Raramai Mifananidzo, iyo mifananidzo inouya kuhupenyu mumasekondi mashoma, iine odhiyo uye kufamba kuti tikwanise kurarama zvakare, isu tinongofanirwa kusiya chigunwe pamufananidzo kwenguva yakareba kuti chione ichifamba pachiratidziri, chinhu chinongowanikwa mu iPhone 6s renji uye ikozvino iPhone SE. Zvakafanana naye Retina Flash, MaSelfies ndiwo marongero ezuva, uye kuva mumwe neiyo iPhone SE kamera, kunyangwe kushomeka kweMpxs, isu tinowana iyo inofananidzwa flash, iyo skrini ichavhenekera pasimba remagetsi kwekanguva kuitira kuti ma selfies edu mune yakaderera-mwenje mamiriro kuita kunge zvisati zvamboitika.
Siri, anogara achiteerera, anogara achiwanikwa. Iyo 2GB ye RAM uye iyo M9 co-processor inoita kuti izvi zvive nyore, saka iyo «Hei siri»Inoenderana zvizere ne iPhone SE, tinogona kukumbira mubatsiri wedu chero nguva. Chinhu icho mukushandisa kwangu kwemazuva ese chakanyanyisa kubatsira mumota semuenzaniso, pasina hazvo kuziva kwandakaisa nhare, ini ndinongofanira kuti «Hei Siri, tamba rondedzero yangu yeExtremaduro » uye nekuda kwekubatana kweBluetooth rwiyo rwangu rwandinofarira rwemugwagwa rwunotanga kutamba.
Mutengo uye kuwanikwa kweiyo iPhone SE
Ichi chishandiso yakauya mumaoko edu musi wa6 wemwedzi waKubvumbi, nguva yakatarwa inofungidzirwa neApple yekuendesa iyo iPhone SE muSpain kune avo vaive vaichengeta. Sezvatakambotaura, zvese muSpain uye muUnited States of America, kuda kwakamanikidza isu kuti tipe nguva yekuendesa yeiyo iPhone inosvika panosvika mwedzi waMay, saka kana iwe uri kufunga kuitora, chinhu chakanakisa chingave kumira neApple Chitoro uye mirira kusvikira wawana rombo rakanaka kuti yako modhi irimo, zvikasadaro uchafanirwa kumirira. Kana vari vatengesi vakaita saRoselliMac, ivo vachiri munguva yeReserve uye makambani emafoni haasi kupa data chairo rekutanga kuendesa kana. Kana iwe usina kuchengeta, yako yega sarudzo kusvika kupera kwaApril ichave chaiyo Chitoro cheApple.
Nezve mutengo, Iyo iPhone SE inopihwa mumhando mbiri muSpain:
iPhone SE - 16 GB - € 489,00
iPhone SE - 64 - € 589,00
Iyo iPhone SE yakaguma yave yakawanda kupfuura zvataitarisira, bere rakapfeka matehwe emakwai, chikara chebhuru chaicho chakapfeka silika. Iko kuita kwebhatiri kwakatanhamara kana ichienzaniswa nemamwe ese mafaera muiyo iPhone renji, Apple haina kuda kuita chikanganiso chakafanana neiyo iPhone 5C, haina kunge yaida kushandura vashoma-ma-inchi vashandisi kuita yakazara rehash vadzidzi. Izvo kune vakawanda zvinoita senge isina kusimba poindi, dhizaini, mukufunga kwangu kubudirira, kushandisa zvekare zvirongwa zveiyo iPhone 5s zvakabvumidza iyo kambani kudzikisa mitengo uye kupa izvo kusvika ikozvino iyo yakachipa kwazvo iPhone, ichiperekedzwa neyekurwisa kwemoyo Hardware, iyo inoguma mune chimwe chezvinhu zvine simba kwazvo pamusika uye pasina kupokana idzo ina-inch kifaa inova isingachinjiki Mambo wechikamu. Zvichida kuiswa kweiyo 3D Kubata kwakarasika, kunyangwe Apple yakakwidza nyaya dzehukuru, zvaisazokuvadza kuisa tekinoroji iyi mu iPhone SE pamwe nekugadzira huwandu hwe32 GB yekuchengetera kuburitsa. Izvo zviri pachena ndezvekuti kunyangwe zvingave kune vamwe, iwo mana inches haana kufa, ivo vari pano uye ivo vanofanira kugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Wongorora uye unboxing yeiyo iPhone SE, iyo huru diki iPhone
Ini ndinoida, asi kwete mutengo wayo, zvirinani kubvisa € 200 pairi, kuti uve muurayi wea android
apple inofanira kuita 5se plus
Yakanaka chinyorwa Miguel. Kumbundira.
Apple inosimudza mitengo ye-in-app uye kutenga kweapp muNorway
Apple skates muIndia neiyo iPhone SE